My Little Poem Factory: လမ်းဆုံးဘူတာလေးကို ဆိုက်ရောက်မလာတဲ့ အနှေးရထားတစ်စီးရဲ့ကြေငြာချက်
« Home | ရွာဝေးလေး » | ဆက်မရေးဖြစ်တော့တဲ့ ကဗျာ » | နောက်ဆုံးညနေ » | ဒီနေ့ » | ဒီအခန်းလေး » | အချစ် » | သံယောဇဉ် » | ကြောင် » | လေခိုနေတဲ့ ညနေ » | ဆေးရုံ »
လမ်းဆုံးဘူတာလေးကို ဆိုက်ရောက်မလာတဲ့ အနှေးရထားတစ်စီးရဲ့ကြေငြာချက်
ဒီနေ့ . . .
မနက်ဖြန်တွေ များစွာအထိပါ. . . . .
+ စိုးလှိုက်ဦး +
Labels: love, စိုးလှိုက်ဦး
Posted by Ðaywalker[Soul] on Sunday, February 1, 2009 at 3:56 AM | Permalink
ကဗျာလေးတွေ လာ ဖတ်တယ်နော်
Posted by ကောင်းကင်ပြာ | March 17, 2009 at 1:11 PM
Posted by ကဗျာဦး | May 6, 2009 at 3:16 PM
Posted by Nan | October 19, 2009 at 6:59 PM
Posted by မေမေခင် | November 3, 2009 at 1:51 PM
Posted by Mg Thounnja | November 13, 2009 at 7:49 AM
Posted by မေခင် | November 30, 2009 at 4:43 PM
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ | July 19, 2010 at 9:57 AM
Posted by Genelyn | June 12, 2012 at 4:04 AM
Posted by Win Zin Min Raja | March 1, 2014 at 9:29 PM
MyLittlePoemFactory by Daywalker is licensed underaCreative Commons Attribution 3.0 United States License.
Based onawork at daywalker-poem.blogspot.com.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://daywalker-poem.blogspot.com.